hablaha gus imisa santi ah ayaa ku filan? - iftineducation.com
hablaha gus imisa santi ah ayaa ku filan?
aadan21 / September 23, 2016
iftineducation.com – hablaha gus imisa santi ah ayaa ku filan?
Kethy waa Gabar American ah oo guursatay Nin Somali ah, waxaana ay sheegtay inay ninkaasi marki hore ay sheekeysan jireen, balse habeen habeenada kamid ah ayay sheekeysteen kadibna uu taabsiiyay xubintiisa taranka, iyadoo isla habeenkaas u qaaday jaceyl xad dhaaf ah.
Gabadhan ayaa sheegtay in marki ay is guursadeen kadib waxa ay sheegtay inay ka heshay ninkan, sida uu ugu qanciyay sariirta, iyadoo tiri ” waxaan u bogay waxa uu igaliyay habeenki ugu horeysay, anoo u qaaday jaceyl xad dhaaf ah ” waana gabadhii ugu horeysay oo hadal noocaan ah sheegtay.
Weriye shaqada looga joojiyay sawir laga qaaday